अाइन्स्टाइन, एक प्रिय साथी र रेजिडेन्सी डाक्टर – जनस्वास्थ्य खबर
डा. शम्भु खनाल, काठमाण्डाै। भौतिकशास्त्रको नबीन प्रगतिको बारेमा कनफरेन्सबाट निस्किएपछि अाइन्स्टाइनलाई एक दिन भित्रैदेखि धन्यवाद दिन मन लाग्छ । त्यसैले म सोच्दासोच्दै पूरै कल्पनामा उड्न थालेछु । घोत्लिँदै म १९४५ सालमा पुगेर कल्पनामा डुबेछु । अाइन्स्टाइनको जिवन्त जिवनलाई नजिकबाट चियाएउन मन लागेर । । म स्वप्निल दुनियाँमा अाइन्स्टाइन सँग बात मार्ने प्रयास गर्दै छु । आज अाइन्स्टाइन खै किन हो निकै दंग देखिन्छन् । शायद कुनै भौतिकशास्त्रको सिद्धान्त मिलेको होला उनलाई । कोठाभरी कोरिएका कागजका खेस्रा छर्पस्ट देखिन्छ । ति भाग्यमानी अक्षरहरु र अंकहरुमा आउँदो संसार बदल्न सक्ने नियती छ । कालोपाटिमा कुनै सुत्रमा खेलिराखेका अंक देख्न सकिन्छ । सुर्यको किरणमा अाइन्स्टाइन आफ्नो भौतिक शास्त्रको सिद्धान्त खोज्दै टोलाइरहेका छन् । एउटा काठको कुर्सिमा बसेर मन्द मुस्कुराउँदै छन्। ठेली किताबहरु पनि रमाइरहेका छन् आज अाइन्स्टाइनलाई मुस्कुराएको देखेर ।
सुत्रहरु दिमागमा बेजोड खेल्न थाल्छन् । एक्कासी उनी उफ्रिन्छन् पागलजस्तै । भरखर जन्मेको पाठो बुरुक्क उफ्रेजस्तै । आफ्नी प्रियाको गालामा किस गर्छन् र खुशी हुँदै भन्छन् “ समय सापेक्ष कुरा हो । प्रिय । समय सापेक्ष हो । “त्यसपछी उदय हुन्छ अाइन्स्टाइनको लोक चर्चित सापेक्षताबादको सिद्धान्त । सरल भाषामा बुझ्दा आगोमा एक मिनट बर्शौ जस्तो महसुस हुने र प्रियसङको घन्टौको साथ एक मिनेटजस्तो । समयको यात्रा र प्रकाशको गतीको सिद्धान्तमा भौतिकशास्त्रमा फड्को मार्छ पुरै २० औ शताब्दी आजको दिनबाट । समयलाई नियालेर हेर्ने कोशीस गर्दै थिएँ अाइन्स्टाइनसँग म । टिङटिङ ध्वनी सुनिन्छ कता कता ।
बिहानको तीखो अलार्म घन्टी बज्छ । अनी म झस्याङ हुन्छु । आँखा खुल्छ बेडमा । घडी हेर्छु त ८ बजिसकेको छ । आँखा अगाडिबाट प्रिय साथी अलप हुन्छिन् । अाइन्स्टाइन पनि अलप हुन्छन् । न समयको यात्राा न मनको यात्राा अब । अब त सिधै वार्डतिरको यात्रामा दिमागले शरीरलाई ड्राइभिङ गर्छ । दाँत टल्काउने देखी सेतो कोट भिर्नेसम्म केबल १५ मिनेट मस्तिष्कको ड्राइभिङ । मनले त सुतिरहुँ भन्छ । ब्रेकमात्र लगाउने प्रयास मनको । रेजिडेन्सीको उपहार भनेकै काम गर्ने र समय मिले सुत्ने । समय नमिले मस्तिस्कको ” अफ “ बटन् नथिचियोस् भन्ने प्रयास गर्दै काम गर्ने । बाटोभरी अलप भएका दृष्य फेरि हेर्न मन लाग्छ र आँखा बन्द गरेर बिचार गर्छु । समय नै कहाँ होला र आँखा खोलेको बेला अनुभव गर्न ! फर्किएर ति अनुभव अाउन् भन्ने उत्कट इच्छा गर्छु । तन्द्रामा मात्र नभएर पूरा होसहावासमा अाइन्स्टाइनको सिद्धान्त अनुभव गर्ने मन हुन्छ । पेरिसको अाइफल टावरमा मलाई अाइन्स्टाइनको सिद्धान्त पूर्ण अनुभुती गर्ने प्रार्थना गर्छु । पुन : उही मनप्रिय साथीसँग । आशा गर्छु यसपटक कसैले डिस्ट्र्ब गर्ने छैन । न अलार्म घन्टीले न नियतिले न समयले ।
त्यो सिद्धान्त कसरी भौतिकशास्त्रीले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा नबुझेपनी त्यो अनुभव गर्न सकिन्छ । कुनै दुबिधा छैन। जिवन्त अनुभव । भावसून्य अनुभव ।केमिस्ट्री मिलेको अनुभव । शायद उनलाई पनि मलाई जस्तो हुँदो पो हो कि ! त्यो भने अन्योल नै रह्यो । उनले मेरो जन्मदिनको दिन बिर्सेंकोले शायद उनको मनको कुनामा म अटेको छैन होला ।
Related Topics:Featuredjanaswasthya khabarshambhu khanal